Izomashela eyokushicilelwa kwemiphumela iCosas | Isolezwe
Izomashela eyokushicilelwa kwemiphumela iCosas
Isolezwe / 27 December 2012, 1:46pm / MHLENGI SHANGASE
ABAFUNDI badela ubuthongo befuna ukubheka ukuthi baphasile yini. ICosas iyakuhlaba ukukhishwa kwemiphumela emaphephandabeni ithi lokhu kudala ingcindezi engenasidingo kubafundi. Ihlele imashi eThekwini ngosuku lokukhishwa kwemiphumela. Isithombe: Timothy Bernard
INHLANGANO yabafundi iCosas KwaZulu-Natal ithi izomisa nse yonke into imashe ngosuku lokukhishwa kwemiphumela ka-matric ngoba ayihambisani nokuthi ishicilelwe emaphepha-ndabeni.
Le nhlangano ikusho lokhu nje nyakenye uphiko lwentsha lwamaKhomanisi uFasimba lwahlaba ikhwelo elifanayo lokuthi imiphumela ka-matric ayingashicilelwa emaphephandabeni ngoba ifaka ingcindezi engenasidingo kubafundi.
UFasimba lwathi abafundi bayazibulala ngoba basuke bengaphumanga emaphe-pheni bese bezitshela ukuthi bafeyilile.
Le mashi izoba ngoJanuwari 3, ngosuku lokukhishwa kwemiphumela isuka eCity Hall iye emahhovisi oMnyango wezeMfundo eKZN, eTruro House.
Unobhala weCosas esifundazweni, uPhindile Mdanda, uthe amaphepha awabasizi ngalutho abafundi kodwa enza inzuzo ngemiphumela yabafundi.
Uthe abafundi baba nengcindezi abanye bazibulale ngoba basuke sebesaba ukuhlekwa yizwe ngoba bengaphumanga ephepheni.
“Sikholwa wukuthi ukudalulwa kwemiphumela yabafundi kuwukuthunaza ilungelo lalowo mfundi. UNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo u-Angie Motshekga akanaso isisombululo kubafundi abazibulalayo ngoba bengazange baphume ephepheni,” kusho uMdanda.
Uthe abazali yibona okufanele balande imiphumela yabafundi ezikoleni ngosuku lokukhishwa kwayo ngoba kusuke kunothisha abazobasiza babachazele ngayo.
“Kwamanye amabanga umfundi imiphumela yakhe uyilanda esikoleni ngakho sithi neka-matric ayilandwe khona. Akungashintshi ngoba esefike kwa-matric. Abahlala kude abaposelwe yona kodwa ayingashicilelwa idalulelwe izwe kunalokho ayilandwe ezikoleni,” usho kanje.
Ngokomnyango kazwelonke inhloso yokushicilela le miphumela wukugqugquzela abafundi ukuthi benze kahle nanokusiza labo abasuke bekude ukuthi bakwazi ukubona ukuthi benze kanjani.
INhloko yoMnyango wezeMfundo esifundazweni, uDkt Nkosinathi Sishi, itshele Isolezwe ukuthi ngokohlelo olukhona lomnyango, imiphumela izokhishwa emaphephandabeni.
USishi uthe udaba lokushicilelwa kwemiphumela lusingethwe ngumnyango kazwelonke wathi kodwa beyisifundazwe bebengakasitholi isiphakamiso seCosas ngalolu daba.